मेरो सोच जस्ताको तेस्तै | मनमा लागेको कुरा लेख्छु, सकारात्मक होस् या नकारात्मक
July 20, 2017 July 26, 2017 / takdirbartaula	/ Leaveacomment
भैरव अर्यालबाट प्रेरित भएर लेख्न थाले
July 9, 2017 July 26, 2017 / takdirbartaula	/ Leaveacomment
सबै जनाले अंग्रेजीमा आ-आफ्नो ब्लग लेख्न थाले, मैले चाहिँ नेपालीमा नै लेख्छु भनेर निधो गरे । मैले हरेक हप्ता एउटा एउटा गरेर नेपालीमा आफ्नो ब्लगमा आफ्नो लेखहरु राख्न थाले । यदी तपाई मलाई सोध्नुहुन्छ मेरो कुनचाहिँ लेख मलाई नै राम्रो लाग्छ भनेर, मेरो जवाफ गोलभेडा हुनेछ । त्यो लेख मैले कक्षा १२ मा भैरव अर्यालको आलु नामक हास्य व्यंग्य ले भरेको निबन्ध पढ्दा लेखेको हो । कसरी लेख्ने जागर चल्यो त थाहा छैन मलाई पनि तर जब पहिलो अनुच्छेद लेखे तब मैले पढेर दिदिलाई सुनाए अनि दिदिले, “खुब लेख्छस तैले, यो काँ बाट चोरेर पढेको भन त भन्नु भयो ।“
तेसपछि मैले यसलाई पुरा नै गरेर छोड्छु भन्ने मनमा लाग्यो अनि फेरी आलु निबन्ध पढ्दै गोलभेडा निबन्ध लेख्न थाले । हरेक अनुच्छेद लेखेर दिदीलाई पढेर सुनाउथे अनि दिदीले मिलेन भनेको ठाउँमा सच्याउथे । जब मैले लेखेर पुरा गरे तब दिदीलाई पढेर सुनाए अनि दिदीले राम्रो छ भनेपछि भोलि कक्षामा सरलाई पनि सुनाउछु भनेर सोचे । भोलिपल्ट कक्षामा सरले पढाउन सुरु गरे पछि साथीलाई मैले लेखेको छ भन्न लगाए अनि सरले मलाई पढेर सुनाउन भन्नु भयो । म निबन्ध लेखेको कागज लिएर उठे अनि सबै कक्षाले सुन्ने गरि ठुलो सोरमा पढेर सुनाए । सरले एकदम ध्यान दिएर मेरो गोलभेडा निबन्ध सुन्नु भयो अनि मलाई, “तैले त खुबै राम्रो लेख्दो रैछ्स त केटो । मैले भनेको मन्छ्स भने यो तेरो लेख गोरखापत्रमा छपा, सारै राम्रो लेखेको रैछ्स ।” तेसपछि कहाँ गएर छाप्न दिने भन्ने नै थाहा भएन अनि कुरा तेत्तिकैमा सक्कियो तर आज पनि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले आफ्नो मुनामदनमा गर्व गरे जस्तै मा पनि मेरो गोलभेडा निबन्धमा गर्व गर्दछु ।
मेरो पहिलो प्रेम – सेतो हिउँ (भाग – २)
July 1, 2017 July 18, 2017 / takdirbartaula	/ Leaveacomment
…… अनि त्यसपछी मैले पूर्ण रुपमा आफुलाई उनको मानिसकेको थिए। अर्को सेक्शनमा गए पछी न त उनिसंग बोल्ने मौका पाए न त देख्ने नै । शान्त र सुशील स्वभाव भएकी उनलाई कक्षा बाहिर कहिले कहिँ मात्र देख्न पाउथे । बोल्न जाउँ पनि के भनेर जाउँ, के सिधै गएर मलाई तिमी साह्रै मन परेउ भन्न पनि नमिल्ने अरु बोल्ने त बहाना नै थिएन म संग, तेसैले मैले उनको फेसबुक प्रोफाइल खोज्न थाले । उनको फेसबुक प्रोफाइल खोज्दै थिए, हरीले खोज्दै गर्दा मलाई देख्यो अनि उ चाहिँ आहानाको साथी संग राम्ररी बोल्न थालिसकेको रहेछ अनि उसले गएर साथीलाई आहानाको फेसबुक प्रोफाइल के हो भनेर सोधेछ ।
संजोगको कुरा के भने उनको साथीलाई मैले बि. एस. सी. सी. एस. आई. टि. को इन्ट्रान्स परिक्षामा भेटेको थिए । त्यति बेला हाम्रो राम्ररी कुराकानी भएको थियो तर कक्षा सुरु भए पछि हाम्रो बोलचाल त्यति हुन सकेन अनि मैले चुरोट खाने कुरा थाहा पाए पछाडि उनलाई मेरो नराम्रो प्रभाव परेको रहेछ, तेसैले उनले हरीलाई आहानाको फेसबुक प्रोफाइल दिईनन्। मन त त्यति बेला दुखी भयो जब थाहा पाए कि उनले त आहानालाई पनि म संग नबोल्न र बोल्न आए पनि टाढा बस्न भनेको रहेछ भन्ने कुरा मलाई हरीले भन्यो । एक मनमा लग्यो कि मेरो प्रेम कथा सुरु नहुदै कसैले घाटी निमोठ्दै हत्या गर्दियो तर फेरी सोचे चाहें उ मेरो होस् या नहोस, म उनको प्रतिक्षा गर्छु । तेस्पछाडिका मेरा हरेक दिनहरु उनलाई नै सोच्दैमा बित्न थाल्यो । अनि उनलाई देखेको २ हप्ता पछाडि मैले उनको ……..
मेरो पहिलो प्रेम – “सेतो हिउँ” (भाग – १)
June 21, 2017 July 18, 2017 / takdirbartaula	/ Leaveacomment
पहिलो कक्षा सुरु हुनु भन्दा ठिक अगी एक जना कक्षाकोथामा प्रवेश गरिन् । कालो जकेट, कालै जिन्सको पैन्ट र कालो बूट लगाएकी उनि बिस्तारै आइन र अगाडिबाट दोश्रो बेन्चमा बसिन । कलेजको दोश्रो दिनमा देखिएको नयाँ अनुहार मेरो आँखामा अड्कियो । उनको कक्षा ११ र १२ मा संगै पढेको साथी भएको कारणले उनि दोश्रो बेन्चमा बसेकी रहिछन् । सानै देखि उटफट्यांग मैले सोधी हाले, “नयाँ आउने सोल्टीनीको नाम चाहिँ के होला कुन्नि? परिचय नै नगरी सरक्क बस्दिन्ने?” नयाँ भएर होला उनले केहि पनि बोलिनन अझ भनौ फर्केर पनि हेरिनन तर उनको साथीले उठेर भनिन,” उसको नाम आहाना गुरुंग ” । पहिलो नजरको मायामा विश्वास नगर्ने म उनलाई देखे पछि सोच्न बाध्य भए । तर मेरो दुर्भाग्य पहिलो कक्षाको समाप्ति संगै उनि अर्को सेक्शनमा गईन ।
क्क्षा १२ को परिक्षा सके पछि मैले इन्जीएर बन्ने सपना लिएर आई. ओ. इ. को इन्ट्रान्स परिक्षा दिए तर कम अंक प्राप्त गरेको हुनाले मैले बि. एस. सी. सी. एस. आई. टि. पढ्ने निर्णय गरे । सम्पूर्ण तयारी भईसकेपछि मैले राधाकृष्ण आई. टि. कलेजमा (नाम परिबर्तन) भर्ना गरे र कलेजको दोश्रो दिनमा यो घटना भयो । भनिन्छ नि मनमा कुनै कुरा बसे पछि सजिलै हट्दैन । तेसपछि बिस्तारै कक्षाको साथीहरु संग मेलमिलाप बढ्यो र एकदिन चिया खाने ठाउँमा मैले केटाहरुलाई भने कि सुन है केटाको त्यो आहाना तिमीहरुको भाउजु हुने वाला छ मलाई एकदम नै मन पर्यो त्यो केटि । अनि त्यसपछी मैले पूर्ण रुपमा आफुलाई उनको…….
रोनाल्डोका संघर्सपूर्ण दिनहरु
June 12, 2017 July 18, 2017 / takdirbartaula	/ Leaveacomment
फुटबल खेलेर खान पुग्दै भनेर उनलाई आज भन्दा 20 बर्षअगी
उनका गुरुले भनेका थिए। तर आज उनी फुटबल खेलेर विश्वको
सबै भन्दा महँगो खेलाडी बनेका छन्। उनको नाम हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
उनको पुरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सान्तोस अभेइरो हो।
उनी ५ फेब्रुअरी १९८५ मा पोर्चुगलको फुंचल मदेईरा भन्ने
ठाउँमा जन्मिएका हुन्। उनको पिता डिनिस अभेइरो हुन। उनी
नगर निगममा एक मालीको काम गर्दथे। पार्क र मैदानको
रेखदेख गरेर आफ्नो घर चलाऊथे। रोनाल्डोको आमाको नाम
मारिया हो। रोनाल्डो का १ दाई र २ बैनी छन। उनको पुरा
परिवार एउटा सानो टिन् को छत भको घरमा बस्ने गर्दथे।
रोनाल्डोले सानै उमेर देखी फुटबल खेल्न सुरु गरेका थिए।
उनको खेल प्रतीको लगाब देखेर मात्र ८ बर्सको उमेरमा उनलाई
एन्दोरिन्हा खेलकुद क्लबले आफ्नो टिममा लिएको थियो।
रोनाल्डोको आमा उनलाई बच्चामा “रुन्चे बच्चा” भनेर
बोलाउथिन किनभने जब रोनाल्डो खेलमा गोल गर्न सक्दैनन
थिए, खेल मैदानमै रुन थालदथे। १० बर्षको उमेरमा उनले सहरको
सबैभन्दा ठुलो क्लब नासिओनल एफ. सी. बाट खेल्ने मौका पाए । उनले
त्यो क्लबबाट २ बर्ष खेले। १९८७ मा उनी पोर्चुगलको
स्पोर्टिंग क्लबमा ट्रायलको लागि गए। त्यहाँ उनको खेल हेरेर
उनलाई क्लबले १५०० पाउण्डमा उनलाई अनुबन्धन गर्यो। यो क्लब पोर्चुगलको
राजधानी लिस्बोनमा थियो। उनी त्यो क्लबमा खेल्न
जादा आफ्नो घर परिवार छोड्नु पर्यो जस्को कारण
रोनाल्डो धेरै दुखी भए तर उनले आफुले आफुलाई सम्हाले र त्यो
क्लबमा खेल्न थाले। त्यहाँ पनि उनले धेरै मेहेनत गरे र आफ्नो
खेलले सबैलाई प्रभावित पारे।
१५ बर्षको उमेरमा थाहा भयोकी उनलाई मुटु सम्बन्धि समस्या छ।
डाक्टरले उनलाई फुटबल नखेल्न सल्लाह दिए कि त सल्लेक्रिया
गर्नु पर्ने बताए। त्यो समयमा उनी सँग २ वटा बाटो थियो,
कि फुटबल खेल्न छोड्ने कि धेरै जोखिमपूर्ण सल्लेक्रिया गर्नु पर्ने
थियो। रोनाल्डोको लागि अब फुटबल छोड्न त्यति सजिलो
थिएन, त्यसैले उनले सल्लेक्रिया गर्ने निर्णय गरे र भाग्यले सल्लेक्रिया सफल
भयो। केही दिनको आराम पछी उनी फेरी मैदानमा फर्किए र
आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गर्न तर्फ लागि परे। तर त्यहिँ समयमा
उनको जिबनमा फेरी एकदम दुखी मोड आयो रक्सी धेरै
खाको कारनले ५२ बर्षको उमेरमा उनको पिताको मृत्यु
यो घटनाले रोनाल्डो एकदमै दुखी भए किनभने रोनाल्डोका पिता
उनको सबैभन्दा नजिक थिए। उनी आफ्नो हरेक कुरा आफ्नो
पितासँग भन्ने गर्दथे। त्यहिँ घटनापछी रोनाल्डोले आजसम्म
रक्सीलाई हात लगाको छैनन।
June 2, 2017 July 18, 2017 / takdirbartaula	/ Leaveacomment
May 25, 2017 July 18, 2017 / takdirbartaula	/ Leaveacomment
May 15, 2017 July 18, 2017 / takdirbartaula	/ Leaveacomment
पत्रकार – प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार !
ओली – “जस्तालाई तस्तै, ढिँडोलाई निस्तै”, नमस्कार मेरो पनि ।
पत्रकार – पछिल्ला केही महिनादेखि सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, सरकार चलाउँदाको अनुभव कस्तो हुँदैछ ?
ओली – “भँगेरो मार्न सजिलो, भुत्ल्याउन गाह्रो” भन्ने सुनेको थिएँ । भोग्दै छु , सोचेजस्तो सजिलो छैन ।
पत्रकार – एमाले सरकारको कार्यशैलीमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र २ धार छ, गगन थापा र सुजाता कोइराला चाहिँ तपाईँको समर्थनमा छ नि ; के हो गाँठी ??
ओली – के भनौ खै, लेखनाथ पौडेलको कविता सुन्नुभएको छैन कि के हो ? सुन्नुस् – “हिलैमा भ्यागुतो बस्छ, हिलैमा कमलस्थिति ! स्थानले के कुरा गर्नु ? भिन्नै छ गुणको गति ।”
पत्रकार – माओवादी पार्टी कहिले एमालेको समर्थन गर्छ त कहिले विरोध गर्छ, यसमा केही कारण छ कि ?
ओली – माओवादी पाटी जँड्याहा पोइजस्तो हो, कहिले त्यही मुखले मिठो म्वाइ खान्छ, कहिले नमिठो गाली गर्छ,जस्तो भएन सहनै पर्ने, के गर्नु ? पोइ त आखिर पोइ नै हो नि !!
पत्रकार – इन्डियाले ढलाउनै आटेको एमाले सरकार कसरी जोगाउनुभयो?
ओली – हाहाहाहा, हाहाहाहाहाहा !! “इन्डिया भन्दा आइडिया ठुलो” भन्ने थाहा छैन तपाईँलाई ??
पत्रकार – कहिलेकाहीँ पार्टी भित्रैबाट पनि तपाईँको विरोध हुन्छ नि !
ओली – के भनौ”झगडालु स्वास्नी काउसोको माला” भन्छु चित्त बुझाउँछु।
पत्रकार – राजदूत दीपकुमार उपाध्याय बोलाउनुभयो नि, किन हो ?
ओली – काङ्ग्रेसले नियुक्ति दिएकै भए नि, केही गर्छन् कि भन्ने लागेको थियो, “ढिकीले स्वर्ग गए पनि धानै कुट्दो रहेछ”, माखो मारेनन्, फिर्ता बोलाएँ ।
पत्रकार – शेरबहादुर देउबा किन यतिबिधि भारतपरस्त भएर बोलेका ?
ओली – “लाटो बाहुनको काम नै घन्टा बजाउने”हो, शेरे बोलिरहन्छन् । “मकैको रोटीमा घिउ हाल्नु र माइतीको सम्पत्तिमा जीउ हाल्नु बेकार हो” भन्ने कुरा देउबालाई कसले बुझाइदिने ?
पत्रकार – शेरबहादुर देउबाले काङ्ग्रेसलाई अब केही देलान् ?
ओली – केही दिँदैनन्, “सुघ्घरी स्वास्नीको पोइ मोटाउँछ, फोहोरी स्वास्नीको कुकुर मोटाउँछ”, देउवाका कारण काँग्रेस दुब्लाउँछ, भारत मोटाउँदै जान्छ । म त बुढो भएँ, तपाईँहरू हेर्दै जानुहोला ।
पत्रकार – राप्रपा नेपाल पार्टीले केही गर्छ कि ?
ओली – खै, “मगरको उमेर र भेडाको उमेर ज्यान हेरेर अन्दाज गर्न सकिँदो रहेनछ”, केही गरेछ भने गरेपछि पत्याउँला ।
पत्रकार – बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्ति पाटीमा थुप्रै व्यक्तिको उपस्थिति देखियो, कसरी हेर्नुभएकोछ यसलाई ?
ओली – हैन, कसरी हेर्नु अब ! “भालुको चाकमा भुत्लाको के दरिद्र?” होलान् २/४ भुसुनाहरू ।
पत्रकार – मधेसी नेताहरू पछिल्लोपटक धेरै पटक दिल्ली धाइरहेका छन्, केही छ यसमा?
ओली – हाहाहा, स्वास्नी रिसाए कहाँ जान्छे ? माइत ।
“ओह्रालो लागेको घाम र पखाला लागेको बुढो कतिन्जेल टिक्छ?” थाहा हुँदैन । मधेसीलाई पखाला लागेको छ । छिटै सिद्धिन्छन् ।
पत्रकार – उता सिके राउत मधेस देश बनाउँछु भन्दै कुर्लिएका छन् नि !
ओली – हाहाहा, घरमा चर्पी समेत बनाउन नसक्ने २ कौडीका बिहारी घुसपैठियाहरूले देश बनाउने रे !!
पत्रकार – सिके राउतलाई जेल हाल्ने या देशनिकाला गर्नुपर्दैन ??
ओली – हैन, सबै कुकुर काँशी गए गु कसले खान्छ ? यो कुकुर यहीँ रहोस् । यो हल्लिएको दाँत हो, एक दिन आफैँ फुस्किन्छ, टन्टै साफ….
May 6, 2017 July 18, 2017 / takdirbartaula	/ Leaveacomment
चैत्र ३०, २०७१ सालको अन्तिम दिन रातभर “न्यु इयर इभ” मनाउने हो भनेर बिहानै प्लान बनाए अनि तेही अनुसार सबै कामहरू पनि छिटो छिटो गरेर म ६ बजे अफिसबाट निस्किए । अब घर गएर ड्रेस फेरेर जानु पर्छ केटाहरूसँग रात भर दारू खानु पर्छ भनेर बाहिर निस्केको मात्र के थिएँ मुटु (गल्फ्रेन्ड) को फोन आयो । उता बाट मधुर स्वरमा उनले भनिन “मुटु, तिम्रो आज कतै जाने प्लान त छैन नि ?” अनि मैले भने “किन र मुटु ?” उनले भनिन “हैन के मुटु आज ‘न्यु इयर इभ’ मा तिमि र म मिलेर मनाउन भन्नलाई हो ।” अब मुटुको कुरा कसरी काट्न सक्नु, अनि भइहाल्छ नि भने । केटाहरुलाई म आउन मिलेन यार, बुडीले एक्लै हुन्छे रे अनि “न्यु इयर इभ” सँगै मनाउने भन्दै छे भनेर भने अनि चेन्ज भएको प्लान अनुसार घर गए, खाना खाए अनि मुटुको तिर हान्निएँ । उनको घर अगाडी पुगेपछी मैले उनलाई फोन गरे अनि तल आउन भने र सधै जस्तो उनले भनिन “एकछिन न मेरो मुटु, ‘फाइनल टच अप’ बाँकि नै छ ।“ १० मिनेट पछी उनि बाहिर आइन् र हामी अन्त कहाँ जानु १ घन्टा अगाडि बनाको प्लानमा भनेर वसन्तपुरतिर लाग्यौँ । रातको १२ बजे सम्म हामी घुम्यौँ, कन्सर्ट थियो त्यहाँ गयौँ, अनि १२ बजे एक-अर्कालाई नयाँ वर्षको सुभकामना आदान प्रदान गर्‍यौँ ।
नयाँ वर्ष २०७२ लाई मज्जाले स्वागत गर्‍यौँ अनि रात भर नाच्यौँ, खायौँ अनि घुम्यौँ र बिहानको ४ बजे मुटुलाई उसको घरमा छोडेर म पनि आफ्नो कोठा तिर लागेँ । यो वर्ष पनि मुटुसँगै “न्यु इयर इभ” मनाउने प्लान थियो तर अगि दिउसो मात्र हाम्रो सानो कुरामा मनमुटाव भयो र उनी मसँग रिसाएर घर गइन् । मैले फोन गरेँ, मेसेज गरेँ तर कुनै जवाफ आएन । रातको ११ बजेर ५० मिनेट गइसकेको थियो तै पनि कुनै मेसेज , फोन आएन तर ११ बजेर ५३ मिनेट मा फोनको रिङ् बज्यो । म एकदम खुसी भएँ किनाकी त्यो मेरो मुटुको फोन थियो । उनले ‘आइ एम सरी’ भन्दै नयाँ वर्षको सुभकामना दिइन् र यसपाली पनि पोहोर सालको जसरिनै नयाँ वर्ष मनाउने प्रस्ताव राखिन् र मैले हवस् भने अनि रातको १२ बजे मुटुको तिर लागे नयाँ वर्ष मनाउन । यसरी नै तपाईछहरूको पनि नयाँ वर्ष आफुले चाहेको मानिससँग वा साथीहरूसँग वा घर परिवारसँग बसेर मनाउनुहोस्, रमाइलो गरेर नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नुहोस् । तपाईँहरूको नयाँ वर्ष पनि शुभरहोस्, हरेक पाइलाले सफलताको शिखर चुमुन्, हाँसो अनि खुसीले तपाईँको जीवन तृप्तहोस् । यो नयाँ वर्षको तपाईँहरुलाई मेरो शुभकामना ।
April 26, 2017 July 18, 2017 / takdirbartaula	/ Leaveacomment
रस चुस्दा फुललाई दुख्ला भमराले सोच्ने भए।
घमण्डले फूलले पनि काडाले झैँ घोच्ने भए॥
माया गर्दा तिमीले जस्तै सबले धोका दिने भए।
सानातिना कुराहरू तेसै मनमा लिने भए॥
अल्पायुमै मर्छु भनि शिरिष फुल्न छोड्ने भए।
तिमीले जस्तो बिना कसुर सबले प्रेम तोड्ने भए॥
जोडी छुटाइ ढुकुर पनि एक्लै एक्लै उड्ने भए।
कति पिडा होला फुललाई कोपिलामै चुड्ने भए॥
प्रेम शब्द किन आउथ्यो तिमीले जस्तै गर्ने भए।
सच्चा मेरो प्रेम भन्दै भ्रमको बिउ छर्ने भए॥
म पनि त तिमीजस्तै धोका दिदै जिउने भए।
विषको महत्त्व तब हुन्छ चोटै-चोटमा पिउने भए॥
हात काट्थेँ , औँला काट्थे मेरो चोटमा हास्ने भए।
अर्को जुनी कुरी बस्छु चोको माया गास्ने भए ॥